အကြည့်တစ်ချက်နဲ့ဖမ်းစားနိုင်မယ့်မျက်တောင်မွေးတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ . . . – Good Health Journal
အကြည့်တစ်ချက်နဲ့ဖမ်းစားနိုင်မယ့်မျက်တောင်မွေးတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ . . .
မျက်တောင်လေးတွေဟာ မျက်ဝန်းရဲ့အလှကို အဓိက အားဖြည့်ပေးတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မျက်တောင်တု တွေမတပ်ကြတော့ဘဲ ဒီနေ့ခတ်မှာ သဘာဝကျကျပုံဖော်နိုင်မယ့် မျက်တောင်ဆက်တာတွေ လုပ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက် တောင်ဆက်တာမှာလည်း သူ့ Risk နဲ့သူရှိနေပြန်ပါတယ်။ မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေ၊ မျက်စဉ်းခတ်တဲ့ ဆေးတွေကြောင့် လည်း မျက်တောင်ကျွတ်တာ အဖြစ်များပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ကတော့ ကိုယ်ရဲ့နဂိုရှိရင်းစွဲမျက်တောင်လေးတွေ ကျန်းမာ အောင်၊ မပျက်စီးအောင် စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့က အဓိကပါပဲ။
အုန်းဆီစစ်စစ် (Virgin Coconut Oil) က မျက်လုံးတစ် ဝိုက်မှာ အသုံးပြုဖို့ စိတ်ချရတဲ့အဆီတစ်မျိုးပါ။ သူကမျက် တောင်မွေးတွေကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး သန်မာစေပါတယ်။ လက်ကို သန့်စင်အောင်အရင် ဆေးကြောပါ၊ အုန်းဆီစစ်စစ်ကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ယူပြီး မျက်တောင်လေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေး လိုက်ရုံပါပဲ။ အုန်းဆီအပြင် သံလွင်ဆီနဲ့ ဗီတာမင် အီး အဆီကို လည်း မျက်တောင်လေးတွေ ကျန်းမာအောင် အသုံးပြုနိုင်ပါ တယ်။ ကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မျက်တောင်ကော့ဆေးပုလင်းရဲ့ မျက် တောင်မွေးကော့တံကို အသုံးပြုပြီး မျက်တောင်လေးတွေကို အဆီဆွတ်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
တချို့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေချို့တဲ့ရင် ဆံကေသာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်တောင်မွေးပဲဖြစ်ဖြစ် သန်စွမ်းကျန်းမာဖို့ အ နှောင့်အနှေးဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘိုင်အိုတင်ချို့တဲ့ရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သံဓာတ်၊ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂၊ ဗီတာ မင်ဒီနဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ပြည့်ဝအောင်လည်း ဂရုစိုက်ပါ။
မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေက မျက်တောင်မွေးကို ထိ ခိုက်စေပါတယ်။ တစ်နေကုန်ခံတဲ့ မျက်တောင်ကော့ဆေး တွေက ပိုပြီးတောင် ထိခိုက်စေပါတယ်။ မျက်တောင်ကော့ဆေး အသုံးမပြုခင်မှာ Primer တစ်ထပ်ခံတာ၊ ဗီတာမင် အီးလို အား ဖြည့်အဆီတစ်မျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့ မျက်တောင်ကော့ဆေးအသုံး ပြုတာလုပ်ပါ။ ညမအိပ်ခင်မှာလည်း မျက်တောင်ကော့ဆေး တွေကို ပြောင်စင်အောင် သန့်စင်ပြီးမှ အိပ်ပါ။ ဒိတ်လွန်သွားတဲ့ မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေကို အသုံးမပြုပါနဲ့။
Green Tea လက်ဖက်ခြောက်က ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်း ပေါကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ပုံမှန်သောက်ပေးတာက အသားအရေရော၊ လက်သည်းကျန်းမာရေးကိုရော အထောက် အကူပြုပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်ထုပ်ကို ရေနွေးစိမ်ပြီး သောက်ပါ။ အအေးခံပြီး မျက်လုံးပေါ်တင်ပေးမယ်ဆိုရင် မျက် တောင်မွေးတွေကို အားဖြည့်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မျက်တောင်တုကပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ကော်က မျက် တောင်မွေးတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ မျက်တောင်တု ပြန်ဖြုတ် တဲ့အခါမှာလည်း မျက်တောင်မွေးတွေပါ ကျွတ်ပါလာနိုင်ပါသေး တယ်။ ဒါကြောင့် မျက်တောင်တုကပ်တဲ့အခါ မျက်တောင်ရင်းနဲ့ အနည်းငယ်ခွာကပ်တာလုပ်ပါ၊ ပြန်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာလည်း အုန်း ဆီအသုံးပြုပြီး ကော်ကိုကွာအောင်အရင်လုပ်ပြီးမှ ခွာပါ။ မျက် တောင်တုတပ်ပြီး ဘယ်တော့မှ မအိပ်ပါနဲ့။
Categories:	Beauty	/ by Good Health Journal February 21, 2020